Markhaatiyaasha Yehowah Sidee Bay u Abaabulaan Wacdigooda?
Wacdiga Boqortooyada Sidee Buu u Abaabulan Yahay?
Intuunan Ciise dhiman wuxuu yiri: “Injiilkan boqortooyada [warka wanaagsan] ayaa dunida oo dhan lagu wacdiyi doonaa inuu marag u noqdo quruumaha oo dhan, dabadeedna ugudambaysta ayaa iman doonta.” (Matayos 24:14) Laakiin sidee baa hawshan wacdiga oo caalamiga ah loo qaban doonaa? Hawshan waxaa la fulin karaa markii la raaco habkuu Ciise ina baray dunida markuu joogay.—Luukos 8:1.
Dadka waxaan ugu tagnaa guryahooda. Ciise xertiisii wuxuu baray inay warka wanaagsan guri ilaa guri ku wacdiyaan. (Matayos 10:11-13; Falimaha Rasuullada 5:42; 20:20) Wacdiyayaashaas waqtigii Ciise waxaa loo dhiibay degaan gooni ah ay ka wacdiyaan. (Matayos 10:5, 6; 2 Korintos 10:13) Sidoo kale maanta hawsheenna wacdiga si fiican bay u habeysan tahay oo kiniisad walba waxaa la siiyay agagaar ay ka shaqeeyaan. Tani waxay nagu caawisaa inaan fulinno amarkii Ciise oo ahaa “inaannu dadka wacdinno, aannuna markhaati u furno.”—Falimaha Rasuullada 10:42.
Waxaan ku dadaalnaa inaan dadka gaarno meeshii laga heli karaba. Ciise baa matal inoo noqday markuu dadka ku wacdin jiray meelaha bannaanka ah sida xeebta ama ceelka oo kale. (Markos 4:1; Yooxanaa 4:5-15) Sidoo kale annagana markaan awoodno baan dadka kala hadalnaa Kitaabka. Waxaan dadka la hadalnaa markaan joogno waddooyinka, beeraha, meelaha ganacsiga ama telefoonkaan kala xiriirnaa. Markaan helno fursad fiican ehelkeenna, deriskeenna kuwa nala shaqeeya iyo kuwa iskuulka nala dhigtaba waan u markhaatifurnaa. Waxyaalahan aawadood waxaa suuraggalay inay malaayiin qof maqlaan “warka wanaagsan . . . oo badbaadada.”—Ishacyaah 52:7.
Ma ka fekeri kartaa qof ad la wadaagi lahayd warka wanaagsan ee Boqortooyada Ilaahay iyo warkaas mustaqbalkooda wuxuu u tari doono? Farriintan rajada leh dadka ha ka qadin. Sida ugu dhaqsaha badan ula wadaag.
Warkee wanaagsan baa waajib ah in la wacdiyo?
Markhaatiyaasha Yehowah sidee bay ugu daydaan habkuu Ciise u wacdin jiray?
Qofka Bibleka ku baro weyddiiso inuu ku tuso sidaad si ixtiraam leh qof ad taqaanid ula wadaagi kartid tacliin ad Kitaabka ka baratay.
Markhaatiyaasha Yehowah oo u Abaabulan Hawsha Wacdiga
Wadaag Wadaag Wacdiga Boqortooyada Sidee Buu u Abaabulan Yahay?